#Mike Tyson Oo Beertay Xashiishad Uu Kaligii Cabo - Get Latest News From Horn of Africa
#Mike Tyson Oo Beertay Xashiishad Uu Kaligii Cabo
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 15, 2019
Mike Tyson ayaa shaaca ka qaaday inuu qiimo aad u badan ku bixiyo tabcashada iyo cabida daroogada xashiiska.
Feeryahanka halyeeyga ah oo 53 sanno jir ah ayaa sheegay inuu bil walba cabo xashiis qiimihiisa kor u dhaafayo 40 kun oo doolar.
Gobolka California ee dalka Mareykanka oo daroogada xashiishada ay sharci ka tahay ayuu Mike Tyson ku leeyahay beer weyn oo ku tabco xashiishada waxaana uu sheegay in inta badan waxa ka soo baxa uu isaga cabo.
Wuxuu doonayaa inuu furto huteel daroogada lagu cabo si uu lacag uga sameeyo beerta uu sameystay oo gaareysa 407 hektar.
Tyson ayaa tan iyo intii ka fariistay feerka waxa uu ku jiray ganacsiyo uu lacag ka sameeyo laakiin waxa uu haatan u soo jeestay daroogada xashiida madaam aysan danbi ka aheyn gobolka California.
Mike Tyson oo hore u shaaciyay inuu qaatay Diinta Islaamka ayaa hadana sannadihii u danbeeyay waxa uu ahaa mid ku soo laabtay dhaqankiisii hore ee markii uu gaalka ahaa.
Weli waxa uu sheegaa inuu yahay Muslim laakiin aan ku dhaqmin diinta Islaamka.
Mike Tyson waxa uu diinta Islaamka qaatay bilowgii 90meeyadii markaasoo uu la baxay magaca Malik Abdul Aziz halka wararka qaar ay sheegayeen inuu la baxay Malik Shabazz.
Sannadii 2012 Mike Tyson waxa uu booqday magaalada Barakeysan ee Makkah isagoo soo cumreystay.
Tyson ayaa bishii December 2013 wareysi uu siiyya Fox News waxa uu uga hadlay horumarka uu ka sameeyay inuu iska daayo khamriga, waxaana uu ka hadlay diintiisa, isagoo sheegay inuu ka mahdinayo inuu Muslim yahay oo uu u baahan yahay Allah.